महासचिवमा अर्जुनको ‘अर्जुनदृष्टि’ – BIG FM 101.2 MHz
Home » व्यापार / व्यवसाय » महासचिवमा अर्जुनको ‘अर्जुनदृष्टि’
पोखरा, २४ भदौ । चम्किला आँखा । ठिक्कको कद अनि हँसिलो अनुहार । ३९ वर्षका अर्जुन पोखरेलको बाहिरी आवरण लोभलाग्दो छ । युवा जोश र जाँगर उनमा भरिपूर्ण छ । बाहिर जस्तो देखिन्छन्, त्यस्तै फरासिलो उनको स्वभाव पनि छ ।
अर्जुन पोखरेल यतिबेला पोखराका प्रत्येक व्यवसायीहरुमाझ पुगिरहेका छन् । आसन्न पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२ औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी जो दिएका छन् । रविन्द्रबहादुर प्रजु (रविन्सन) प्यानलबाट उनले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३२ औँ महाधिवशेन आगामी असोज ५ र ६ गते हुँदैछ । र, यो बेला उम्मेदवारहरुलाई उद्योगी व्यवसायीको घरदैलोमा पुगेर भोट माग्न भ्याईनभ्याई छ । महासचिव पदका उम्मेदवार पोखरेल पनि आफ्नो प्यानलसहित भोट माग्न तल्लिन छन् । आफुसँगै आफ्ना प्यानलका अन्य उम्मेदवारका लागि पनि भोट मागिरहेका छन् ।
‘उद्योग वाणिज्य संघमा हाम्रै टिम आउँछ ।’ अर्जुन ढुक्क छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि उनीसहित उनको टिमलाई हौसला दिएका छन् । त्यो सँगै पोखरेलले आफ्नो टिम नै यो पटक चुनावमा अब्बल ठहरिने आधार प्रस्तुत गर्छन्–‘उद्योग वाणिज्य संघका लागि हाम्रो टिम निकै खारिएको, अनुभवी र पर्फेक्ट टिम हो । र, उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि यो कुरालाई महशुस गरेका छन् । व्यवसायिक हितका लागि यहि टिम नै उत्कृष्ट हो भन्ने कुरा उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि बुझेका छन् ।’
उद्योगी व्यवसायीको हक हित र उनीहरुको अधिकारका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको टिम नै अहिलेको आवश्यकता भएको उनले सुनाए । आगामी दिनमा पनि व्यवसायीको हितमै काम गर्दै जाने उनी विश्वास दिलाउँछन् । व्यवसायीमाथि आईपर्ने विभिन्न खाले वाधा, अड्चन र अप्ठेरोमा साथ दिन सँधै आउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
मट्टीखान माउन्टेन भ्यू रिसोर्ट प्रालिका संचालक समेत रहेका पोखरेल २०६३ सालदेखि सक्रिय व्यवसायमा लागेका हुन् । रियल स्टेट व्यवसायबाट यो क्षेत्रमा लागेका उनी त्यसपछि पर्यटन व्यवसायतर्फ फड्को मारे । र, अहिले उनी कालिका अटो केयर प्रालिका संचालक हुन् । अटोमोबाइल्स् क्षेत्र पोखरेलका लागि केहि नयाँ हो । र, व्यवसायको यो यात्रा जारी रहने उनले सुनाए ।
महासचिव पदका लागि आफु दाबेदार भएकैले उम्मेदवारी दिएको उनी बताउँछन् । पोखरेलले यसअघि एक कार्यकाल पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति सदस्य र यसअघिको कार्यकाल उपमहासचिव भएर काम गरिसकेका छन् । संघमा रहेर उनले उद्योगी र व्यवसायीको पक्षमा थुप्रै काम गरिसकेका छन् ।
संघमा रहेर उनीसँग बजार अनुगमन समितिको सँयोजक भएर काम गरिसकेको अनुभव छ । संघको दुई कार्यकालको अवधीमा उनले करिब ६ सय साधारण सदस्य विस्तार समेत गरिसकेको दाबी गर्छन् । पोखरा प्रदर्शनीकेन्द्रमा अत्याधुनिक डोम पोखरेलकै सँयोजकत्वमा निर्माण भएको हो । दर्ता नभएका व्यवसायलाई दर्ता प्रकृयामा ल्याउन पहल गर्नुका साथै फूटपाथ व्यवस्थापन गर्नमा पनि उनको योगदान रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो पटक उनी नेपाल सरकारको छनौटमा परि भारतमा भएको यूथ एक्सचेन्ज प्रोग्राममा पनि सहभागि भएर भारतीय लगानी नेपाल भित्राउन भुमिका खेलेका थिए ।
व्यवसायसँगै विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुमा पनि उनी संलग्न छन् । घरजग्गा व्यवसायी संघको निवर्तमान अध्यक्ष, लायन्स क्लब अफ पोखरा अन्नपूर्णको पुर्व अध्यक्ष, नेपाल युवा उद्यमी मञ्चको सदस्य, पश्चिमाञ्चल होटल संघको सदस्य, पश्चिमाञ्चल अटोमोबाइल्स डिलर्श एशोसियसनको सदस्य, जनप्रिय बहुमखी क्याम्पसको सिनेटर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विशिष्ट सदस्यको रुपमा काम गरेको उनीसँग अनुभव छ ।
पोखरेल भन्छन्–‘कसले कुन बेला उद्योगी व्यवसायीका लागि के गरेको छ ? भन्ने कुरा सम्झिएर उम्मेदवारी रोज्न म मतदाता उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्छु । न कि को कतापट्टीको मान्छे हो भनेर ।’
अघिल्लो पटकको उद्योग वाणिज्य संघको महाधिवेशनको जस्तो विषम परिस्थितीमा पनि व्यवसायीहरुले आफुलाई माया गरेर उपमहासचिव पदमा विजयी गराएको सम्झँदै उनले भने–‘यो पटक त हामी ढुक्क छौँ । उद्योगी व्यवसायीहरुको माया र साथ हामीलाई नै छ ।’
मट्टीखानका यी युवा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव होलान् या नहोलान् ? यो असोजको ५ र ६ गते टुंगो लाग्नेछन् ।